Global Voices teny Malagasy » Vohitra Tiorka Miaro Ny Tenim-borona” Ao Anaty Tontolon’ny Telefaona Finday · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2016 12:55 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika miora
Sokajy: Tiorkia, Mediam-bahoaka, Mozika, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
Mponina ao Kuşköy. Sary nalaina avy amin'ny lahatsary Eurasianet.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra sary sy feo  fiarahamiasa avy amin'ny EurasiaNet.org  nosoratan'i Alexander Christie-Miller . Naverina navoaka miaraka amin'ny fanomezandalàna. Araho ny rohy  hijerena ny sary sy ny feo.
Amin'ny ankamaroan'ny fomba, mitovy amin'ireo tanàna maro hafa mitampify ao amin'ireo Tendrombohitra Pontika manamorona ny moron-dranomasina Maintin'i Tiorkia i Kuşköy. Mamboly dite sy noazeta ireo mponina ao aminy 500 isa eo noho eo; misy làlana iray ahitana mpanao mofo, mpivarotra hena, ary trano fisotroana kafe vitsivitsy. Ny feo, fa tsy ny toerana, no mampiavaka an'i Kuşköy. Nandritra ireo andian-taranaka maro, niresaka tamin'ny fampiasana fomba tokana fifandraisana amin'ny sioka izay nantsoiny ”kuş dili,” na ”tenim-borona” amin'ny Tiorka ireo mponina ao.
Ilay anarana Kuşköy tenany dia midika ”tanànam-borona.” ”Tongava aty hisotro dite eh!” miantso ny mpifanolo-body rindrina aminy i Ibrahim Kodalak raha natao ivelan'ny tranony izy, izay miraikitra amina havoana misy mànda eo ambonin'ny lohasaha iray. ”Miteny” ao anatinà andiana sioka mahadonto sofina, mihirahira tena mitovy amina hiram-borona ilay tantsaha mpamboly noazeta, 45 taona.
Raha ny marina, araka ny lazain'i Kodalak, matetika mitovy amin'ny kuş dili ny feon'ny vorona eo an-toerana; mitovy amin'ny andininy malaza ao amin'ny Korany ny fihiran'ny voromainty amin'ny maraina, hoy izy manamafy. ”Tamin'ny 1986 ny herinaratra vao tonga teto, ary talohan'izay dia sarotra ny fifandraisana amin'ny lavitra; tena nila tenim-borona izahay, ” hoy i Kodalak, niverina niteny Tiorka.
Toy ireo fomba hafa fifandraisana amin'ny sioka, nitombo tao amina faritra iray nisy tany mikitoantoana sy mponina miparitadritaka ny kuş dili izay nahatonga ny fivezivezeana ho sarotra na dia amin'ny halavirana fohy aza. Afaka miantraika mihoatra ny iray kilaometatra ny sioka iray, hoy i Kodalak. ”Raha tsy afaka mampandre ny feonao amina toerana lavitra ianao, azonao atao koa ny manao tohivakana miaraka amina olona hafa mampita ny hafatra.”
Mponina maro no mino fa teraka tamin'ny 400 taona lasa izay ny kuş dili, na dia tsy misy tena mahafantatra marina aza. Ny ”fiteny” , raha ny marina, dia tenim-paritra Tiorika atao sioka, izay ny vaniny tsirairay dia avoaka amina feo 20 samihafa. Ahitana ny fanasana hisotro dite na hanampy amin'ny asa, mampahafantatra ny mpiara-monina amin'ny fahatongavana kamiao haka ny vokatra, na ny filazana fandevenana, fahaterahana sy fanambadiana, ireo no lohahevitra mahazatra hita.
Nanampy anay hiaro ny kuş dili ny fihisàran'ny fizorana mankany amin'ny vaninandro maoderina eto an-tanàna, fa tato anatin'ny folo taona – indrindra hatramin'ny fahatongavan'ny finday – nitontongana ny fampiasàna ilay fiteny, hoy Metin Köçek, ilay mukhtar ao Kuşköy, na ny lehiben'ny vohitra. ”Amin'izao manana làlana isika, herinaratra ary laharana telefaona,” hoy i Köçek. ”Tamin'ny fahazazanay, nampiasaina matetika tamin'ny fiainana an-davanandro ny tenim-borona. Ankehitrinym filàna mitovy no atrehantsika amin'ny fampiasàna ny finday.”
Tsy ny teknolojia ihany no loza mitatao. Tahaka ny any amin'ny faritra ambanivohitra hafa ao Tiorkia, tanora maro no mandao an'i Kuşköy hikaroka fahafahana tsaratsara kokoa any anatin'ireo tanàna tena miroborobo eto amin'ny firenena. ”Ny tsy fahampian'ny fahafahana no olana amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra misy anay,” hoy i Mehmet Fatih Kara, governoran'ny ditrikan'i Canakçı, izay misy an'i Kuşköy. ”Mandeha ary mandao ny zokiolona any aoriana ireo tanora, ary tonga mitsidika fotsiny rehefa fialàntsasatra.”
Nandritra ny 15 taona lasa, nanao fety isan-taona ny tanàna mba hampiroboroboana ilay fiteny. Nisy fampisehoana misioka, ary fifaninanana eo amin'ireo faran'izay mpisioka tsara indrindra, izay ao anatin'izany no hampitàny toromarika ho an'ny tsirairay manerana ny lohasaha eo anatrehan'ireo andianà mpitsara.
”Ny tanjonay dia ny hampiroboroboana ny tenim-borona ato amin'ny firenenay sy manerana izao tontolo izao,” hoy i Şeref Köçek, mpikarakaraka ny fety, ary filohan'ny Fikambanan'ny Tenim-borona ao an-tanàna.
Manodidina ny olona 2.000 no nanatrika ny fety tamin'ity taona ity, tamin'ny 8 Jolay, izay nanisy tsindrimpeo kokoa teo amin'ny mozika sy dihy avy ao an-toerana noho ny fisiahana. Saika avy any amin'ny toerana akaiky daholo ny ankamaroan'ny rehetra, na ireo havany izay niverina manokana hanatrika ilay fety.
Mino i Kara fa afaka ampiasaina ho toy ny fomba hampandrosoana ny toekarena eo an-toerana ary hampijanona ny fifindramonina mankany an-drenivohitra amin'izao fotoana izao ny kuş dili. ”Te-hampiasa ny fizahantany aho mba hanodinana ity fomba fiteny ity ho loharano ara-toekarena ho an'ny faritra,” hoy izy.
Vao haingana, nanantona ny Türk Telekom izy, ilay orinasam-panjakana fahiny nisahana ny fifandraisandavitra, mba hanome fanohanana ara-bola ilay fetibe. Tamin'ny fotoana namoahana ny lahtsoratra, tsy novalian'ny solontenan'ny Telekom ilay fangatahana.
Tokony ho nampiasaina mba hanatsarana ny làlana ao amin'ny faritra ilay famatsiam-bola, ary hamindràna ilay fetibe ho amina toerana tsara tarehy kokoa eo ambony lemaka feno bozaka ambonin'ny tanàna, hoy izy.
Ho hita eo raha hanampy hamadika ny fitontonganana miandalan'ny kuş dili izany rehetra izany.
Fa ho an'i Rıfat, mpamono afo, 38 taona, ao Istanbola, rahalahin'i Seref Köçek Talen'ny Fikambanan'ny Tenim-borona, izay miantso ny kuş dili ho ”tenin-dreniny”, manana adidy hiaro ny lova ara-kolotsainany i Kuşköy. ”[I]sika dia mila mitazona ny teny ho velona ho fanajana ireo razambentsika,” hoy izy. ”Ry zareo no namorona azy io, ary tsy nahafantatra mihitsy ry zareo hoe mety hampalaza antsika io indray andro any.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/16/89766/
 lahatsoratra sary sy feo: http://www.eurasianet.org/node/65658
 Alexander Christie-Miller: http://www.eurasianet.org/taxonomy/term/2997